စာဖတ်သူ မရှိခြင်းနှင့် စာအုပ်ရရှိမှု အခက်အခဲများကြောင့် ကျေးလက် စာကြည့်တိုက်များ ပိတ်ထားရ - Yangon Media Group
စာဖတ်သူ မရှိခြင်းနှင့် စာအုပ်ရရှိမှု အခက်အခဲများကြောင့် ကျေးလက် စာကြည့်တိုက်များ ပိတ်ထားရ
အောင်လံ၊ မတ် ၁၇
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ကျေးလက်စာကြည့်တိုက်များ တွင် စာဖတ်သူမရှိခြင်းနှင့် စာအုပ် စင်များမရှိမှု၊ စာအုပ်ပျောက်ဆုံးမှု၊ စာအုပ်ထိန်းသိမ်းသူမရှိမှု၊ စာအုပ် ရရှိမှုအခက်အခဲများကြောင့် ပိတ် ထားရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ”စာကြည့်တိုက်မှူးမရှိတာနဲ့ ပစ္စည်းထိန်းသိန်းရေးမလုပ်နိုင် တာရယ်။ တချို့စာဖတ်သူတွေက စာအုပ်တွေငှားပြီး ပြန်မပေးတာနဲ့ တချို့ကလွယ်အိတ်ထဲ ထည့်ယူကြ တယ်။ ထိန်းသိမ်းမှုမရှိတော့ စာ ကြည့်တိုက်ကိုပိတ်ထားရတာဖြစ် ပါတယ်”ဟု အောင်လံမြို့နယ်ပန်း မတကျေးရွာမှ ကိုဝင်းနိုင်ကပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကျေး ရွာအုပ်စု ၂၄၄ တွင်ကိုယ်ထူကိုယ် ထစနစ်ဖြင့် စာကြည့်တိုက်များဖွင့် လှစ်ထားသော်လည်း စာဖတ်သူ မရှိခြင်းနှင့် စာအုပ်အသစ်များရရှိ မှု၊ စာကြည့်တိုက်ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ စာအုပ်များထိန်းသိမ်းသူ စာကြည့် တိုက်မှူးမရှိခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်အ ဆောက်အအုံများ ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း စသည်တို့ကြောင့် စာကြည့်တိုက် များကို ပိတ်ထားရသည်။
”ကျွန်မတို့ကျေးရွာစာကြည့် တိုက်ကိုဖွင့်တာ ငါးနှစ်ကျော်ပါ ပြီ။ စာကြည့်တိုက်မှူးသင်တန်းကို တော့ သုံးနှစ်တက်ဖူးပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ကိုယ့်ရပ်ရွာမှာက ကူညီမယ့် သူမရှိတော့မဖွင့်ဖြစ်ပါဘူး။ကျောင်း ပိတ်တဲ့အခါမှာ ကလေးတွေပဲစိတ် ဝင်စားပါတယ်။ စာအုပ်ရရှိမှုက သင်တန်းတက်တုန်းက စာပေရေ ချမ်းစင်က စာအုပ်တွေပေးတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမပေးတော့ပါဘူး။ စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တုန်းကတော့ လာဖတ်သူများပါတယ်”ဟု အောင် လံမြို့နယ် ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာ မှ မချိုမာထွေးကပြောသည်။
အောင်လံမြို့နယ်အတွင်း ကျေး လက်စာကြည့်တိုက်များမှ ဒေသခံ ကျေးရွာပြည်သူများအတွက် စာကြည့်တိုက်ထိန်းသိမ်းရေးသင်တန်းကို မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ အခမဲ့သင်တန်းများ ပို့ချပေးထားသော်လည်း ကျေးရွာများတွင် လက်တွေ့ဆောင် ရွက်ရာ၌ အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ် နေကာ စာကြည့်တိုက်များမှာ အရေ အတွက်သာရှိပြီး အများစုမှာ ပိတ် ထားရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
တိုက်ပွဲများကြား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော တအာင်း (ပလောင်) တိုင်းရင်းသားများ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ရေးအ?
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြို့အချို့တွင် စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း မီးဖြတ်ပြီး ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန?
‘မုန်းစွဲ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အွန်လိုင်းတင်သူကို တရားစွဲဆို
အသင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီးနောက် အောင်မြင်မှုများ ရယူသွားရန် ဂတ်တူဆို တိုက်တွန်း
ထိုင်း- မြန်မာ ကုန်စည်ပြပွဲ (Thailand Myanmar Border Trade Fair 2019) မဲဆောက်မြို့၌ ကျင်းပ